CrabCoin စျေး - အွန်လိုင်း CRAB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CrabCoin (CRAB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CrabCoin (CRAB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CrabCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CrabCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CrabCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CrabCoinCRAB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000502CrabCoinCRAB သို့ ယူရိုEUR€0.000426CrabCoinCRAB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000384CrabCoinCRAB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000458CrabCoinCRAB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00455CrabCoinCRAB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00317CrabCoinCRAB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0112CrabCoinCRAB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00188CrabCoinCRAB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000672CrabCoinCRAB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000701CrabCoinCRAB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0112CrabCoinCRAB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00389CrabCoinCRAB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00272CrabCoinCRAB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0376CrabCoinCRAB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0842CrabCoinCRAB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000689CrabCoinCRAB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00076CrabCoinCRAB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0157CrabCoinCRAB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0035CrabCoinCRAB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0531CrabCoinCRAB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.597CrabCoinCRAB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.19CrabCoinCRAB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.037CrabCoinCRAB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0139
CrabCoinCRAB သို့ BitcoinBTC0.00000004 CrabCoinCRAB သို့ EthereumETH0.000001 CrabCoinCRAB သို့ LitecoinLTC0.000009 CrabCoinCRAB သို့ DigitalCashDASH0.000005 CrabCoinCRAB သို့ MoneroXMR0.000005 CrabCoinCRAB သို့ NxtNXT0.0361 CrabCoinCRAB သို့ Ethereum ClassicETC0.00007 CrabCoinCRAB သို့ DogecoinDOGE0.146 CrabCoinCRAB သို့ ZCashZEC0.000005 CrabCoinCRAB သို့ BitsharesBTS0.0198 CrabCoinCRAB သို့ DigiByteDGB0.0188 CrabCoinCRAB သို့ RippleXRP0.00175 CrabCoinCRAB သို့ BitcoinDarkBTCD0.00002 CrabCoinCRAB သို့ PeerCoinPPC0.00175 CrabCoinCRAB သို့ CraigsCoinCRAIG0.23 CrabCoinCRAB သို့ BitstakeXBS0.0215 CrabCoinCRAB သို့ PayCoinXPY0.0088 CrabCoinCRAB သို့ ProsperCoinPRC0.0633 CrabCoinCRAB သို့ YbCoinYBC0.0000003 CrabCoinCRAB သို့ DarkKushDANK0.162 CrabCoinCRAB သို့ GiveCoinGIVE1.09 CrabCoinCRAB သို့ KoboCoinKOBO0.119 CrabCoinCRAB သို့ DarkTokenDT0.000462 CrabCoinCRAB သို့ CETUS CoinCETI1.45